Ny Hainan'i Shina dia misarika ny mpandeha an-tany mihoatra ny morontsiraka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Ny Hainan'i Shina dia misarika ny mpandeha an-tany mihoatra ny morontsiraka
Yana Zhuravleva, 38 taona, avy any Russia, dia zatra nipetraka tao Hainan, nosy tropikaly any amin'ny tendrony atsimon'i Sina, ka mikasa ny hitondra ny reniny sy ny renibeny hipetraka miaraka aminy izy.
“Mahafinaritra ny fiainana eto. Tsara ny tontolo iainana ary misy fotoana maro ahafahana miasa, ”hoy i Zhuravleva.
Zhuravleva, izay tonga voalohany tao Hainan tamin'ny 2005, dia niasa tao amin'ny maso ivoho mpitety faritany. Noho ny fitomboan'ny mpizahatany rosiana tany Hainan noho ny fitsaboana dia nivadika asa i Zhuravleva roa taona lasa izay hanombohany miasa ao amin'ny hopitaly fitsaboana sinoa, izay nanompo mpizahatany Rosiana 1,000 tamin'ny taon-dasa.
Nilaza i Zhuravleva fa ny nofinofy lehibe indrindra dia ny hahazo vola ampy hividianana trano kely any Sanya, tanàna amoron-tsiraka any Hainan.
Mihamaro hatrany ny vahiny toa an'i Zhuravleva tonga tao Hainan ary raiki-pitia tamin'ny nosy tropikaly, tsy hoe hankafy ny toetr'andro mafana sy ny tara-masoandro ary ny morontsiraka fotsiny, fa hanaraka ny nofinofisin'izy ireo.
DESTINATION TOURIST AN'IZAO TONTOLO IZAO
Hainan dia nandroso fandrosoana lehibe tamin'ny tanjona kendreny ho tonga mpizahatany kilasy manerantany. Nametraka tanjona ny handray mpizahatany amina firenena 1.3 tapitrisa mahery amin'ny taona 2020.
"Tian'ireo mpizahatany rosiana ny mitsidika ny nosy, tsy hoe satria akaiky azy io, fa noho ny fahafahanao mankafy traikefa amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fialamboly, hetsika ara-kolontsaina ary fitsaboana," hoy i Andrey Denisov, masoivohon'i Rosiana any Sina. .
Hainan dia manolotra fonosana fitsangatsanganana maro karazana izay ahitana fitsangatsanganana, torapasika, fomba amam-panao, ala tropikaly, fanatanjahan-tena ary fikarakarana ara-pahasalamana.
Rosiana mpizahatany 280,000 XNUMX mahery no nankany Hainan tamin'ny taon-dasa, fitomboana avo roa heny raha oharina tamin'ny herintaona lasa izay, hoy i Denisov.
"Manantena izahay fa hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany, hampiakatra ny isan-jaton'ny mpizahatany rosiana ho 50 isan-jaton'ny mpizahatany any ivelany mankany Hainan," hoy izy.
Raha ny marina dia nihoatra ny 1.1 tapitrisa ny isan'ireo mpizahatany ampitan-dranomasina mankany Hainan tamin'ny 2017, izany hoe 50 isan-jato isan-taona isan-taona, araka ny antontan'isa avy amin'ny manampahefana ao an-toerana.
Hisy drafitra mandritra ny telo taona hivoahana amin'ity taona ity mba hahatonga ny nosy ho toerana avo lenta, miaraka amin'ny politika tombony toy ny serivisy tsy misy visa, fampiroboroboana tapakila ary fanavaozana ny serivisy.
“Manantena ny hiverina any Hainan aho satria mieritreritra aho fa ny fiovana ao dia mitovy amin'ny an'i Shina sisa. Azoko atao ny milaza izany amin'ny alàlan'ny fijerena fotsiny ny sary avy eto, ”hoy ny masoivoho norvezianina any China Geir O. Pedersen, izay nitsidika ny faritany tamin'ny 1988.
Ny takelaka fampirantiana lehibe sy trano rantsankazo mampiseho haitaitra eto an-toerana sy ireo fivoarana farany tao Hainan dia ampahany tamin'ny hetsika fampiroboroboana natao ny zoma tao Beijing. Nahasarika olona 500 mahery ny hetsika, anisan'izany i Pedersen sy diplaomaty hafa avy amin'ny firenena 160 mahery.
"Tsy morontsiraka mahafinaritra fotsiny, olona tsara tarehy, fa fivoaran-javatra mahaliana maro koa, tranobe vaovao, indostria, indrindra ny fampandrosoana teknolojia avo lenta," hoy i Pedersen, izay naneho fanantenana hanatsara ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fifampitondrana hery avy amin'ny tsirairay.
Ny fivoaran'i Hainan dia nanomboka 30 taona lasa izay, rehefa natsangana ho faritra ara-toekarena manokana ny faritany.
"Tamin'izany fotoana izany, Hainan dia faritany somary mihemotra miaraka amin'ny fotodrafitrasa tsy dia tsara akory, ary tsy mahita jiro akory ianao", hoy i Shen Xiaoming, governoran'ny Governemantam-bahoaka Hainan.
Ilay nosy fambolena teo aloha dia nanjary mpisava lalana amin'ny fanavaozana sy ny fisokafana. Ny tambajotram-pitaterana an-dranomasina an-dranomasina dia efa natsangana mba hampifandray ny faritany amin'ny eran'izao tontolo izao, ary io nosy io ihany koa no toeram-pivorian'ny fivoriana isan-taona an'ny Boao Forum for Asia.
“Tianay ny handefa ny fanasana ataonay ho an'izao tontolo izao. Tongasoa eto Hainan amin'ny fialan-tsasatra, fampiasam-bola ary hiaina ny kolontsaina maro karazana, "hoy i Shen.